Vaovao - Voninahitry ny orinasa
Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd. dia orinasa marina manana mari-pahaizana feno sy voninahitra maro. 17 taona mahery ny orinasa no eo amin'ny fampandrosoana ary efa niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa maro. Betsaka koa ny fifanakalozana miaraka amin'ireo fikambanam-barotra lehibe. Amin'ny fifanakalozana dia manohy mianatra avy amin'ny lafin-javatra tsara an'ny hafa izahay, mandray ny fotony ary manary ny tain-droa, ary mandroso mavitrika, ka mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ho avy ny orinasanay.
Tao amin'ny Konferansa fiderana fidiram-bola ho an'ny Integrity Enterprise Association 2016 dia nahazo ny loka "Mpikambana ao amin'ny Yantai Enterprise Integrity Promotion Association" izy. Ny fisafidianana quota amin'ity fihaonambe fiderana ity dia mizara telo: ny fanolorana anarana ho an'ny besinimaro, ny latsa-bato, ny fifidianan'ny samy orinasa, ny hetsika dia ara-drariny sy misokatra ary amin'ny alàlan'ny fisafidianana sy ny fisafidianana ireo sosona dia tafapetraka ihany ny quota. Ny voninahitra noraisina tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy fanekena ny orinasanay fotsiny, fa antenaina koa amintsika, manantena fa afaka manao tsaratsara kokoa amin'ny ho avy. Nomena anaram-boninahitra marobe ihany koa izy avy amin'ny governemanta eo an-toerana toy ny mpandraharaha miavaka, orinasa marina, efitrano fivorian'ny mpikambana ao amin'ny varotra ary mpikambana ao amin'ny orinasa mpivarotra. Ny firenena sy faritra sasany izay naondrinay dia tena afa-po amin'ny vokatray ihany koa. Ity koa dia vokatry ny ezaky ny orinasanay hampandroso.
Nandritra ny valanaretina tamin'ny 2020, ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa dia nanao ezaka nifanaraka. Teo ambany fitarihan'ny talen'ny jeneraly dia niasa mihoatra ny ora isan'andro izy ireo mba hamokarana otrikaretina sy vokatra fidiovana, ao anatin'izanymamafa zava-pisotro misy alikaola, famonoana otrikaretina, sarontava fitsaboana, akanjo miaro ary vokatra fiarovana ara-pahasalamana hafa. Nandritra ny valanaretina dia nitana andraikitra lehibe izy io ary nanome antoka ny amin'ny fiarovana ny olona, ​​ny fisorohana ny valanaretina ary ny fivezivezena. Ankoatr'izay, mbola mivoatra am-pahavitrihana vokatra vaovao izahay ary mikaroka hatrany ny ain'ny olona salama.
Fotoana fandefasana: Jun-26-2021